समाचार - कसरी तपाईंको अनुहार आकारको लागि चश्मा छान्ने
तपाईको अनुहारको लागि कस्तो खालको फ्रेम उत्तम हो भनेर पत्ता लगाउन कहिले समस्या भएको छ? तपाई भाग्यमा हुनुहुन्छ! हाम्रो सानो गाईडको साथ तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ कि त्यहाँ सबैका लागि एक फ्रेम छ - र हामी तपाईंलाई भन्न सक्दछौं कि तपाईको लागि सबैभन्दा उत्तम फिट के हो!
मेरो अनुहारको आकार कस्तो छ?
यस्तो लाग्दछ कि तपाईंसँग निम्न मध्ये एक अनुहार आकारहरू छन्: अंडाकार, वर्ग, गोलाकार, मुटु, वा हीरा। ऐनामा हेरेर र तपाईंको अनुहारका सुविधाहरूमा नजिकबाट हेरी तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि कुन तपाईंलाई मिल्छ! कुन अनुहार आकार तपाईसँग छ भन्ने निर्धारण गर्नका लागि तल पढ्नुहोस्, र कुन चश्मा तपाईमा उत्तम देखिन्छ।
कुन चश्मा आकार अंडाकार अनुहार आकार?
धेरै विभिन्न चश्मा आकार अंडाकार अनुहार सूट गर्दछ। अंडाकार आकारको अनुहारले माथिल्लो र थोरै फराकिलो गालका हाडहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन निधारमा अलि कम नै छ। यो लामो, गोलाकार अनुहार आकारले तपाईंलाई लगभग कुनै पनि शैली बन्द गर्न अनुमति दिन्छ - विशेष गरी ठूलो र चौडा फ्रेमहरू। अंडाकार अनुहारको आकारको साथ, फ a्की रंग, बनावट वा फ्रेम आकारको साथ बोल्ड जान स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। वर्ग, trapezoid, कछुवा, र आयताकार - संभावनाहरू अनन्त छन्!
हाम्रो सल्लाह केवल भारी डिजाइन तत्वहरूका साथ संकुचित फ्रेमहरू र फ्रेमहरूमा स्पष्ट पार्नु हो। तिनीहरूले तपाईंको अंडाकार अनुहारमा अनावश्यक लम्बाइको थोरै थप्न सक्छन्।
कुन चश्मा आकार सुइट स्क्वायर फेस?
चश्माका धेरै किसिमका आकारहरू वर्ग अनुहारहरू मिल्दछन्। यो वर्ग हुन hip छ! यदि तपाईंसँग वर्गाकार आकारको अनुहार छ भने, चश्माको धेरै उत्कृष्ट जोडीले तपाईंको सुविधाहरू चापल्ट गर्न सक्छ। जब यो अनुपातमा आउँछ, वर्ग अनुहार जबडा र निधारमा ठूला हुन्छन्। यस आकारलाई एक मजबूत jawline द्वारा परिभाषित गरिएको कारण, नाकमा माथि बसेको चश्माले यस अनुहार चापलुसी भनेर लम्बाइ थप्दछ।
तपाइँको सब भन्दा बलियो सुविधाहरूमा ध्यान आकर्षण गर्न, कालो र गोलाकार छान्नुहोस्, बोरि ang, फ्रेम भन्दा एक राउण्ड इग्लास फ्रेम नरम हुनेछ साथै तपाईंको कोणीय सुविधाहरूमा विपरित थप गर्दछ, तपाईंको अनुहार बाहिर उभिने बनाउँदछ। रिमलेस र अर्ध-रिमलेस फ्रेमहरू सुरूवात गर्नको लागि उत्तम स्थान हो।